News - wingkwa akwa eri ị maghị
Ruo oge ụfọdụ, ụlọ ọrụ na-ere uwe n'ụlọ enwetawo “ọnụ ụzọ dị mma” dị iche iche mgbe ha na-ebupụ ya na Europe, ọbụnadị ụfọdụ ngwaahịa uwe ụmụaka enwetawo nkwupụta dị ukwuu n'ihi eri dị iche iche na-adịghị mma. Ọ bụ ezie na eri akwa akwa maka obere uwe, ogo nke ịkwa akwa nwere nnukwu mmetụta na uwe, yana ụlọ ọrụ na-ahụ maka uwe akwa mba na-arịwanye elu maka ịkwa akwa, mana a ka nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-adịghị nghọta nke uru eriri eri nwere ike ịmepụta. Maka nke a, onye na-ede akụkọ si na "Oge Uwe" gbara Maazi Xin Zhenhai ajụjụ ọnụ, onye isi njikwa Vertex Thread Industry.
Threadkwa eri eri obere lee nnukwu
“Ruo ogologo oge, ọtụtụ mba Europe amachibidoro uwe dị ukwuu esi na China ebubata, ọtụtụ ngwaahịa ụlọ ọrụ eweghachila, na-ewetara ụlọ ọrụ ahụ nnukwu mfu akụ na ụba.” Xin Zhenhai kwuru, sị, “Dịka ọmụmaatụ, enwere ụlọ ọrụ mbupụ uwe ụmụaka nke ụlọ nke ndị na-azụ ahịa Europe na-eweghachi n'ihi nsogbu nke ngwaahịa. Ọ dịghị onye ga-eche echiche banyere ihe kpatara nloghachi ahụ. Ọ bụ naanị na ihe ngosi anụ ahụ na nke kemịkal nke eriri ịkwa akwa ezughi ọkọlọtọ. Achọpụtara eriri isi akwa ahụ nwere 69.9 mg / kg nke 4-aminoazobenzene, ụlọ ọrụ ahụ dara akụ n'ihi nnukwu nkwupụta. "
Ọtụtụ ndị na-eche, enwere mmekọrịta chiri anya dị otú ahụ n'etiti eri ịkwa akwa na akwa uwe? Ye Guocheng kọwara, sị: “N'ezie, ihe ngosi anụ ahụ na nke kemịkal adịchaghị etu a, nke a bụ naanị otu n'ime ihe kpatara ya. Ihe omuma atu ozo, n'usoro imeputa uwe nke umuaka Ihe ntanye eji eji ihe eji eme ihe kariri ihe banyere ntaneti. Onye ọ bụla maara na ma ọ bụ usoro mmepụta ụmụaka ma ọ bụ akwa akwa akwa, ha niile bụ igwe eji arụ ọrụ na nhazi, ha niile na arụkwa usoro mmezi, mana ọ bụrụ na ha nọ n'usoro mmepụta Thedị akwa akwa eji onye na-ajụ ihe abụghị naanị na-emetụta ngwa ngwa nke uwe ụmụaka, mana nke ka mkpa bụ na ọ ga-eme ka igwe agịga gbajie gbapụta n'ahịrị mmepụta. Ọtụtụ mmadụ anaghị aghọta nsogbu a, ọbụnadị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ndị mmadụ etinyeghị uche na nsogbu a karịa. ”
Dabere na Xin Zhenhai, akwa akwa akwa eji eji akwa akwa eme ihe ọ bụghị naanị na ọ ga-esi ike ma sie ike, kamakwa elu nke eri ịkwa akwa kwesịrị ịdị mma, enweghị ntụpọ na enweghị nkwonkwo. Mgbe ejiri ụdị akwa akwa ahụ na igwe ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Ọ gaghị egbochi agịga nke igwe ịkwa akwa ahụ wee mee ka agịga ahụ gbajie. N'ụzọ megidere nke ahụ, eri ịkwa akwa na-adịghị mma na-enwekarị ntụpọ na nkwonkwo, a na-agbajikwa agịga mgbe a na-amaghị ha. Ọ bụrụ na achọtaghị agịga ndị a agbajiri n'oge, ha nwere ike itinye na uwe. Nke a bụ maka uwe ụmụaka. Ọ bụ ihe dị oke egwu maka ndị na-eyi ya.
“Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye nyocha ahụ dị mma hụrụ agịga gbajiri agbaji ezughị ezu n’oge usoro mmepụta ahụ, ọ ga-ahụ agịga ndị ọzọ agbajiri iji gosipụta na ọ nweghị ihe fọdụrụ na uwe ndị ahụ, nke mere na uwe a na-anọghị n'ịntanetị. Ma ọ bụghị ya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na achọtabeghị obere agịga ma ọ bụ na-anọgide na uwe, ọ nwere ike ịnwe nsonaazụ a na-atụghị anya ya. Nke ka njọ, ọ bụrụ na achọta ọnọdụ yiri nke ahụ site na nyocha nke njirimara mbupụ, mgbe ahụ ịlaghachi ụlọ ọrụ ngwongwo ma ọ bụ ntaramahụhụ ntaramahụhụ ga-ewetara ụlọ ọrụ ahụ nnukwu nsogbu akụ na ụba. Xin Zhenhai kwuru, “Eriri ịkwa akwa pere mpe, mana ọ bụ nnukwu mmemme metụtara otu akwa na ọbụlagodi azụmahịa. Ndị China na-ekwukarị, 'Ebibiri mbibi a na ntụ akwụ', n'eziokwu, nke a bụ eziokwu.
Ngalaba ndị dị mkpa echetakwara ngalaba azụmaahịa mba ofesi na ndị na-emepụta uwe na-ebupụ na maka uwe ndị ebuputere na European Union, ọ bụghị naanị na akwa ndị ahụ ga-abụ ndị azo azo a machibidoro iwu na ihe ndị ọzọ amachibidoro iwu, kamakwa ime ka mmachibido iwu ịkwa akwa, eri ịcha akwa, eriri na ngwa ndị ọzọ. Ekwesighi ileghara njikwa nke nitrogen dyes n'ihi obere akụkụ nke ihe inyeaka eji akwa.
Ọrụ na ejiji n'otu oge
“N'ezie, ọ bụghị naanị uwe ụmụaka, kama ọtụtụ uwe ugbu a nwere ihe ndị dị elu a chọrọ maka ịkwa eri, dị ka jaketị ala na uwe ndị na-ewu ewu n'èzí.” Xin Zhenhai kwuru, sị, "Maka jaketị ala, otu n'ime nnukwu nsogbu ọrụaka bụ otu esi egbochi" na-agba ọsọ velvet "na ọnọdụ nke pinhole. Iji zere nsogbu a, anyị emejuputala ọtụtụ ndozi teknụzụ, dị ka iji usoro pụrụ iche na mmepụta nke ịkwa akwa, nke mere na ịkwa akwa eri nwere ike nweta mmụba dị elu na ịgbasawanye, nke mere na mgbe anyị jikọtara jaketị n'ụdị a threadkwa akwa eri, ọ nwere ike igwu ọzịza mmetụta, nke nwere ike igbochi pinholes ma nweta mmetụta nke ịghara ịkụ ala. Na mgbakwunye na ndị a, a na-agbakwunye elu nke eri ịkwa akwa na mkpuchi waks Craftsmanship, nke a nwekwara ike izere ihe omume nke "na-agba ọsọ velvet" n'ọtụtụ dị ukwuu. Na mgbakwunye, n'ịkwa akwa ụfọdụ pụrụ iche, dịka akwa n'èzí, akwa denim, wdg, a na-ekwusi ike nke eriri ịkwa akwa ahụ. ”
Aghọtara na n'ugwu ma ọ bụ na ịkwọ ụgbọ mmiri n'èzí, eriri ịkwa akwa ga-enwerịrị nguzogide akwa na mgbochi ịka nká; n'ihe banyere oche ụgbọ ala, na mgbakwunye na ọrụ njikọ dị mkpa, a na-achọkwa okpomọkụ dị elu na nguzogide UV. Na ụfọdụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị n'elu, ogo nke ịkwa akwa na-emetụtakwa nchekwa ndụ nke ndị ọrụ.
Maka ọtụtụ uwe ndị nkịtị, yana mmepe nke ụlọ ọrụ ejiji, uwe jikọtara ejiji na ọrụ, na ịkwa akwa nwere nnukwu mmetụta na ha abụọ. N'oge gara aga, eri ịkwa akwa dị ka ihe maka ijikọ akwa na-arụ ọrụ ịchọ mma na ijikọ, mana ugbu a, ịdụ eri nwekwara ọrụ ọrụ. “Dịka ọmụmaatụ, n'ọnọdụ ndị nkịtị, ọ dị mkpa ka eri ịkwa akwa nwee ike iguzogide mmiri, ịdị mma nke ọma, ịdị nro, na nro. N'ihi na pụrụ iche ọtọ uwe, ọ na-achọrọ nwere waterproof, fireproof, mgbochi static, mgbochi ndọlị, Anti-ịka nká na ndị ọzọ chọrọ nwere ike nweta site pụrụ iche gụchara. ” Xin Zhenhai kwuru.
"Na mgbakwunye na ọrụ ndị a, eriri ịkwa akwa nwere ọrụ ọzọ: ọrụ ịchọ mma, dị ka iji ozugbo na akwa akwa, ma ọ bụ ozugbo na usoro mmepụta akwa, ghọrọ akụkụ dị mkpa nke akwa e ji mara." Xin Zhenhai kwuru, “amalitela. Fọdụ ndị na-emepụta akwa n'ụdị avant-garde na ụdị akwa akwa amalitela ịkpa eri ịkwa akwa dị iche iche ozugbo n'ime akwa nke ha maka imepụta na imepụta ya. A na-eji teknụzụ nhazi a eme ihe naanị na ngwaahịa akwa dị elu. “
Ọ bụ kpọmkwem n'ihi uru nke Veilline Industry na ọtụtụ akụkụ ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụdị ahọrọla ịnọgide na-enwe mmekọrịta ogologo oge na Huamei (ụdị ndị azụmaahịa na-eduga Youngor, Smith Barney, Yaya, wdg). Brandsdị ndị a, ọ bụghị naanị nwere nnukwu ihe dị mkpa maka ịdị mma ngwaahịa, kamakwa ọ na-achọ nhazi dị elu n'etiti eri ịkwa akwa na ụdị ejiji nke uwe n'onwe ya. N'echiche a, eri ịkwa akwa abụghịzi dike na-eme n'azụ, kama o kwesịkwara ịbụ onye na-eme ejiji na onye nkwalite.